———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— လူအများစုဟာ အလုပ်များတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို အနည်းနဲ့အများဆိုသလို နေ့စဉ်ခံစားနေရပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု ခံစားနေရချိန်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေမယ့်နည်းတွေကို လိုက်နာပြီး သက်သာရာရအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရချိန်ကြာသွားရင် စိတ်ဝေဒနာအဖြစ် ပြောင်းသွားနိုင်လို့ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နေကြောင်း ပြသတဲ့ အောက်ပါလက္ခဏာငါးမျိုးကို...
စိတ်ပင်ပန်းဖိစီးနေပါက လုပ်ကိုလုပ်သင့်သည့် နှိပ်နယ်နည်း ၅ ရပ်
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— နှိပ်နယ်တဲ့ကုထုံးက စိတ်ဖိစီးမှုကို တကယ်လျော့ကျစေတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့လုံး ပင်ပန်းဖိစီးနေချိန်မှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ နှိပ်နယ်ပေးသူ မရှိတဲ့အခါ ဘယ်လိုများ လုပ်ရပါ့မလဲလို့ တွေးနေမိပါသလား။ အိမ်မှာရှိတုန်း၊ အလုပ်ကနေ ခဏအနားရတုန်း လုပ်လို့ရမယ့်...
စိတ်ဖိစီးမှုက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုထိခိုက်စေသလဲ ….
………………၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊……………. ဦးနှောက်နှင့် နာ့ဗ်ကြော စိတ်ဖိစီးမှုများရင် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ စိတ်ကယောက်ကယက်ဖြစ်ခြင်း၊ အစာကို အလွန်အကျွံစားခြင်းနဲ့ အနည်းငယ်သာ စားခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲခြင်း၊ မှတ်ဥာဏ်ပြဿနာ၊ အိပ်ပျော်ဖို့ခက်ခဲခြင်းနဲ့ ကြောက်ရွံ့ပူပန်ပြီး...